MAPAR sy TIM : Mpanao sorona fiainam-bahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaMAPAR sy TIM : Mpanao sorona fiainam-bahoaka
17/07/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Fandrebirebena sisa no nataon’ny MAPAR sy ny TIM tamin’ireo vahoaka notarihin’izy ireo nidina teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai taorian’ny nitsanganan’ny governemanta Ntsay Christian. Fandrebirebena sisa ireny kabary tsara lahatra nataon’ny Me Hanitra Razafimanantsoa ireny izay nilaza fa tsy mankasitraka io governemanta iaraha-mitantana io. Efa nahazo fanjakana sy seza ny MAPAR sy ny TIM, nitady izay fomba hanakiviana miandalana ny olona teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai sisa no nataon’izy ireo taorian’ireny fanendrena minisitra tao anaty governemanta ireny, satria sarotra tamin’izy ireo ny avy hatrany dia nanao fanambarana hoe « tapitra ny fitokonana fa efa nahazo seza izahay… ! ».
Nanao fanambarana i Marc Ravalomanana fa tsy misy hidiran’ny TIM mihitsy ny hetsika teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai fa an’ny solombavambahoaka manokana. Tsy vitan’ny mamita-bahoaka tsotra izao ity filoha teo aloha ity fa mihevitra ny olona ho apondra mihitsy. Iza no nanome alàlana ireo solombavambahoaka hanao iny hetsika iny raha tsy ny ben’ny tanànan’Antananarivo, Lalao Ravalomanana, izay midika avy hatrany hoe i Marc Ravalomanana filohan’ny antoko TIM! Na izay fotsiny ihany aza dia ampy ilazana fa mpamita-bahoaka ny filoha teo aloha.
Toraka izany koa ny MAPAR izay misolo tena ny filohan’ny HAT, Andry Rajoelina. Niampanga ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin-javatra maro, ary nitaky ny fialan’ny filoha mihitsy kanefa izao miaraka mivory amin’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ary manaiky ny toromarika rehetra mandritra ny Filan-kevitry ny minisitra izao enkehitriny. Raha ny lojikan’ireny fanambarana teny amin’ny kianjan’ny 13 Mai ireny mantsy no arahina dia tsy tokony hanatrika ny Filankevitry ny minisitra tarihin’ny filoha akory izy ireo.
Mba misy tohiny ve ohatra ireny olona namoy ny ainy ny andron’ny 21 aprily 2018 teny amin’ny 13 Mai ireny? Mba nivaly ve ny fitakian’ireo sendika sy mpiasam-panjakana nampananentaina volana sy kintana ireny? Mba nisy nanonitra ve ny fatiantok’ireo olona nanampy isa ny mpitokona teny amin’ny 13 Mai nandao ny asa fivelomany ireny? Mba misy vahaolana ve ny momba ireo mpianatra notaomina an-dalambe nandao ny sekoly ireny?
Milaza miara-mahita angamba isika androany fa “tsia” avokoa ny valin’izany fanontaniana rehetra izany. Rahoviana isika vahoaka vao tsy hanaiky hataon’ny sasany sorona lava e? Rahoviana isika vahoaka vao tsy hanaiky intsony hataon’ny sasany tohatra fiakarana? Ny MAPAR sy ny TIM izao no eo amin’ny fitondrana, voavaly avokoa ve ireo fitakiana ary efa azo daholo ve ireo fampanantenana? Mazava ho azy fa tsy misy voavaly na iray aza fa ny fiainam-bahoaka fotsiny no natao sorona nahazoana seza sy fahefana, ary miaina anaty tombontsoa maro amin’ny volam-bahoaka avokoa ny fianakavian’izy ireo ankehitriny, adino tahaka ny tsy nisy ilay kianjan’ny 13 Mai. Ny vahoaka madinika moa eo anatrehan’izany rehetra izany, natao sorona lava.